In kasta oo tallaalka COVID safrayaasha Hindiya ee doonaya aag ammaan ah ay ku tagayaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » In kasta oo tallaalka COVID safrayaasha Hindiya ee doonaya aag ammaan ah ay ku tagayaan
Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Hindiya • Investments • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Tallaalka COVID Hindiya
Baadhitaan cusub oo khadka tooska ah lagu sameeyay oo ay samaysay Noor Mahal ayaa si qoto dheer uga muquurtay safarradii iyo qaabkii martigelinta ee Hindiya muddooyinkii u dambeeyay.
Xitaa iyada oo tallaalka COVID-19 laga wado gudaha Hindiya, dadka badankood waxay diiradda saarayaan safarka gudaha.
Fasaxyada Gawaarida Gaaban waa isbeddel u muuqda in halkan la joogo in muddo ah.
Dadka intiisa badani waxay u codeeyeen heerar caafimaad oo heer sare ah iyo badbaado, joogtayn, dalxiis mas'uul ah, iyo mid dhab ah iyo qiimo lacageed oo ah arrimo muhiim ah.
Natiijooyinka sahanka ayaa iftiimiyay in kasta oo xaqiiqda ah in tallaalka COVID ee wadista Hindiya uu socdo oo dadkuna ay is tallaalayaan, 89% dadka deggan India waxay daneynayaan inay booqdaan meelaha gudaha ah ee la socda borotokoolka badbaadada iyo nadaafadda ee COVID. Jawaab bixiyayaashu badankood waxay ku nuuxnuuxsadeen doorbidida heerarka sare ee caafimaadka iyo amniga heerarka dalxiiska, hoteellada iyo meelaha dalxiisyada kahor intaysan dooran meelaha ay safarkooda ugu safrayaan iyo guryaha loogu talo galay joogista, waxay muujiyeen sahanka.
Waxaa sameeyay Noor Mahal, sahanka ayaa sidoo kale goob joog u ahaa socod dalbashada gudaha ee wadamada ajaanibta ah. Sahaminta khadka tooska ah waxaa laga sameeyay muunad dadka waaweyn ee u safray ganacsi ama firaaqo 6dii bilood ee la soo dhaafay waana inay qorsheynayaan inay safraan sannadka 2021. Sida lagu sheegay sahan cusub oo socotada adduunka ee Xog-ogaal ah, oo ay ka qayb qaateen in ka badan 3,000 oo qof oo qaan-gaar ah, mid ka mid ah 3dii qof ayaa inta badan rajeynaya inay la safraan qoyskooda iyo asxaabtooda marka loo eego safarka keli ah. Go'aaminta cunsurrada go'aaminta ka dambeysa xulashada halka hoteelka la doorto, jawaab bixiyayaashu waxay u codeeyeen heerar caafimaad oo heer sare ah iyo badbaado, joogtayn, dalxiis mas'uul ah, iyo mid dhab ah iyo qiime lacageed oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan.